Ogaden News Agency (ONA) – Sanca – Munaasabad Shahaado Sharaf iyo Abaal-marino lagu Gudoonsiiyay Xubnihii Mutaystay
Sanca – Munaasabad Shahaado Sharaf iyo Abaal-marino lagu Gudoonsiiyay Xubnihii Mutaystay
Munaasabad shahaado sharaf iyo abaal marino lagu gudoonsiinayey xubno ka tirsan Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee Dalka Yemen (JOY) ,ayaa ka dhacday Guriga weynee Umada ee xaafada Saafiya, magaalada Sanca galabnimodii Jimcaha.
Munaasabadan oo si aad u weyn loo soo agaasimay ayaa lagu abaarmariyay 4 xubin oo la aqoonsaday wax qabadkii ay muujiyeen sanadkii tagay ee 2014-kii.
Xafladan oo ahayd tii ugu quruxda badnayd ee nooceeda ah is la markaasna hidi’diilo galisay qof kasta oo goob-joog ahaa , ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sar-saraysa Jaaliyadda Ogaadeeniya ee Dalka Yemen (JOY), madaxda gudiga koominitiga, madaxda Ururka Haweenka Ogaadeeniya (UHO), Madaxda Ururka Midowga & Ardayda Ogaadeeniya (OYSU) faraciisa Dalka Yemen, ardayda Jaamacadaha, Dhalin-yaro, haween, wax garad, saxafiyiin iyo dhammaan bulshada qeybaheeda ka la duwan ee ka soo jeeda Dalka la gumeysto ee Ogaadeeniya.
Dadka ka soo qeyb galay munaasabada oo boqolaal kor u dhaafayay ayaa waxa ay in badan oo ka mid ah ku soo labisteen Calanka til-maanta u ah Xoriyada Ogaadeeniya-calankaas oo midabbo ka la jaad-jaad ah oo ay ka mid yihiin casaan, cagaar iyo buluug dhexda ku jira oo ay xidig cad oo shangeesleh dhexda kaga sii jirto.
Munaasabadan oo uu soo qaban-qaabiyay Ururka Dhalinyarada & Arday-da Ogaadeeniya ee OYSU ayaa waxa lagu furay wacdi diini ah oo taabanayay ujeeda’da munaasabada, ka dibna waxa loo sara’kacay heesta Calanka Qaranka Ogaadeeniya ,marka laga yimaado laxanka iyo midhaha ay ku luuqeynaysay kooxfaneeda Horseed Qaran (HQ), waxa gacanta midig boos weyn looga meel da’yay qalbiga dushiisa.
Khudbad ku aadan sharfinta masuuliyiinta wax qabadkooda loo bogay sanadkii ugu danbeeyay ayaa waxa madasha ka soo jeediyay Madaxa Ururka OYSU ee Faraca Dalka Yemen.
” Waxa aan shahaadooyinka iyo abaal marinta u gudoonsiinaynaa waa in aan dhiirigalin ku siino xunbaha, si aynan da’daalkooda u yareyn, is la markaasna u tusno in aan u aqoonsanay wax qabadkoodii sanadkii 2014-kii,” ayuu yidhi Bashiir shugri, Madaxa OYSU ee Dalka Yemen.
” Waxa aan ku boorinaynaa dhammaan dadka xilalka u haya dadkooda, haday noqoto Ururka OYSU, Ururka Haweeenka Ogaadeeniya, Jaaliyada JOY iyo kooxda Fanka ee HQ in ay da’daalkooda sii seddex jibaaraan ku dayasho fiicanna u noqdaan xubnahan ka midka ah ee waajibkooda si hufan oo xilkasnimo ku jirto u gutey,” ayuu hadalkiisa ku daray Mudane Shugri.
Shugri ayaa ugu baaqay dhammaan shacabkii goobta soo buux-dhaafiyay in ay halganka lagu xoreynayo Ogaadeeniya si hagar la’aan ah ugu garab istaagaan, maadaama buuyidhi hadda waxa la sugayo ay tahay gurashada bidhaha halganka.
Shacabka oo shucuur wadaniyadeed oo ka muuqata aad si sahal ah ku ogaan karto marka aad fiiriso wajiyadooda, ayaa erayo lidi ku ah Gumeystaha Tigray-ga iyo Axmaarka ku dhawaaqayay iyaga oo gacanta midigta oo duuban kor u qaadaya ayay mar qudha ku dhawaaqayaan erayo ay ka mid yihiin “Ogaadeeniya ha xorowdo,” “Ogaadeeniya ka is raacdo,” is la markaasna gacanta bidig oo xusul duuban waxa ay u sii deynayaan hoos, waxa ayna cod qudha ku dhawaaqayaan “Gumeysigu ha dhaco,” “Daba’dhilifku ha dhoco” iyo erayo kale oo ay ku niyad jabinayaan basaasiinta aadka loo neceb yahay.
Si kasta ba ha ahaate, waxa mar qudha yeedhay jugta , diryaanka cagta iyo midhaha la is la helayo ee koox faneeda Horseed Qaran iyo sacab,sawaxan iyo mashxarad dhanka dadweynihii daawanayay ay ku muujinayaan sida ay raali uga yihiin in jac looga siiyo ugu danbayn dhaanto ay weheliso erayo rubada jaraya Gumeysiga madow ee Abasiiniya.